Nhau - Nyowani tekinoroji yeDTS steam-mweya yakavhenganiswa sterilization retort
DTS ichangoburwa fan fan inotenderera sterilization retort, tekinoroji yazvino muindasitiri, iyo michina inogona kushandiswa kune akasiyana mafomu ekupakata, isingauraye nzvimbo dzinotonhora, yekumhanyisa kupisa kupisa uye zvimwe zvakanaka.
Iko-fan-type sterilization kettle haifaniri kubviswa nehutu. Kutenderera kweiyo fan kunogona kutyora mweya unotonhorera, kumanikidza mweya kuti uyerere uchitevedza mugero wemhepo, uye nekugadzira kutenderera kwakaenzana mumupendero wetireyi yezvokudya, kuitira kuti mweya uri muketero ufambe, uye kupisa kweye chikafu chinonyanya kukurumidza, iyo sterilization mhedzisiro yakawanda yunifomu. Munguva yekuita mbichana, hapana preheating inodiwa, iyo inochengetedza iyo yekutanga nguva yekupisa uye inopfupisa zvakanyanya nguva yekudzivirira.
Iyo yekudzivirira kupisa uye kupisa kupisa maitiro haishandisi mvura, uye haidi inopisa inopisa kupisa nzira yekuita mvura, iyo inogona kuchengetedza yakawanda yekushandisa simba simba uye mvura simba rekushandisa.
Iyo inovhenekera turbo fan mune fan-mhando sterilization retort inomanikidza iyo steam kuti inoshambadzirwa kune ese zvigadzirwa kubva kune mumwe mugumo kuenda kune mumwe mugumo wekudzosera, kufukidza zvigadzirwa zvese, uye nguva dzose chengetedza kutenderera kwemhepo mune iko kudzosera kuita iyo sterilization isina nzvimbo dzinotonhora.
Iyo fan-mhando sterilization retort ine yakawanda yemahara kudzora kwekumanikidza uye tembiricha, inogona kudzoserwa-kumanikidza kutonhorera, uye ine yakafara nzvimbo yekushandisa. Inogona kuiswa kune ese epamusoro-tembiricha sterilization zvigadzirwa senge inoshanduka kurongedza, mabhodhoro, magaba, zvekudya zvekudya, uye nyama zvigadzirwa.